बालबालिका झण्डै १० प्रतिशत संक्रमित - राप्ती टुडे
बैशाख १८ काठमाडाै‌‍ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिरहँदा यसको उच्च जोखिममा बालबालिका पनि पर्न गएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार वैशाख १ देखि १७ गतेसम्म ४०६९ जना बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ । यो तथ्यांक २० वर्ष मुनिका बालबालिकाको हो । जसमध्ये नौ वर्षसम्मका ९२५ जना र १० देखि १९ वर्षसम्मका ३१४४ जना छन् । प्रतिशतका हिसाबले त्यो क्रमशः २।१२ र ७।१९ प्रतिशत हो भने समग्रमा ९।३१ प्रतिशत हो ।
बिहीबार १५ हजार ९१६ नमुना परीक्षण गर्दा ५ हजार ७२७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ५ हजार ७२७ संक्रमित हुँदा २० वर्ष मुनिका ५०६ जना बालबालिका कोरोनाको चपेटामा परेका छन् । जसमध्ये ९ वर्षसम्मका १३९ जना र १० देखि १९ वर्षसम्मका ३६७ जना छन् । प्रतिशतका हिसाबले त्यो क्रमशः २।४३ र ६।४१ प्रतिशत हो भने समग्रमा ८।८४ प्रतिशत हो ।
चिकित्सकहरु के भन्छन् ?
बालरोग विशेषज्ञ डा। कृष्ण पौडेलले तथ्यांक भन्दा बढी बालबालिकामा संक्रमण देखिन सक्ने बताउँछन् । ‘धेरै संख्यामा लक्षण भएका बालबालिका पनि परीक्षणका दायरामा आएका छैनन् । परीक्षण भएका बालबालिकाको स्वाब संकलनमै समस्य हुने भएकाले पनि रिपोर्ट सही नआउन सक्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि भइरहेको छैन । जति बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ यो पनि धेरै हो ।’ समुदाय स्तरमा अझ धेरै संक्रमित बालबालिका हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारलाई विद्यालय तथा कलेजहरु बन्द गर्न सुझाव दिएको भएपनि त्यसो हुन नसक्दा कोरोनाको संक्रमण दर बढेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
२० वर्षदेखि माथि र ५० वर्षभन्दा मुनिका उमेर समूहका व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण बढी देखिनु नै समुदायका लागि खतरा रहेको उनले बताए । यो उमेर समूहका मानिसहरु कलेज, अफिस, व्यापार तथा व्यवसायमा सक्रिय रहँदा बढी भिडभाडमा रहनु परेका कारण उनीहरुबाट संक्रमण परिवारमा सरेको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।
बढी समय बाहिर घुलमिल हुने अभिभावक सचेत नबन्दा बालबालिकामा पनि संक्रमण बढेको उनको ठम्याइ छ ।
पछिल्लो समय बाँकेको नेपालगञ्ज कोरोनाको हटस्पट नै बन्न पुगेको छ । कोरोना संक्रमण तीब्र बनेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा समेत लगाएको छ । कोरोना संक्रमितले बाँकेका अस्पतालहरु भरिभराउ भएका छन् । बाँकेको भेरी अस्पतालका डाक्टर राजन पाण्डेले सरकारले विद्यालय बन्द गर्न ढिलाइ गरेका कारण पनि बालबालिकामा कोरोनाको जोखिम बढेको बताउँछन् । स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएपछि मात्रै उपचारका लागि अस्पतालसम्म आइपुगेका बालबालिकाको मात्रै परीक्षण हुने गरेको पाइएको उनी बताउँछन् । सामान्य लक्षण भएका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका बालबालिकाहरुको परीक्षण नै हुन नसकेका उनी बताउँछन् ।
बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ?
बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउन अभभिावक नै बढी सेचत र जिम्मेवार हुनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । संक्रमण तीब्र रुपमा बढी रहेका कारण बालबालिकालाई घर बाहिर निस्कन नदिने, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्ने र गराउन लगाउनु पर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
बालबालिकालाई लक्षित गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने नारायणी अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन दास बताउँछन् ।
अनलाइन खबरमा प्रकािशत
← खाली सिलीन्डर भए उपलब्ध गराउन बबईका अध्यक्षको अनुरोध
बेड नहुँदा भुईमै उपचार, कोरोना अस्पताल बेलझुन्डी →
अब दुई हजारमै पीसीआर जाँच हुने
२०७७, २८ भाद्र आईतवार २०७७, २८ भाद्र आईतवार raptitoday	0
हापुरेमा प्रत्यक सनिबार बिशेषज्ञ, कुन सनिबार कुन डाक्टर लिस्ट सहित
२०७७, २३ आश्विन शुक्रबार २०७७, २३ आश्विन शुक्रबार raptitoday	0
२०७८, १८ बैशाख शनिबार २०७८, १८ बैशाख शनिबार raptitoday	0